Zirconium Carbide Powder, ZrC - Goodao Technology Co., Ltd.
loo adeegsaday diyaarinta waxqabadka sare ee tignoolajiyada sida carbide-ka sibidhka ah ee ashigh, aerospace, tamarta atomiga, textileelectronics, daahan, filim adag iyo otomaatiyada biraha. Qalabka cusub ee carbonomposite wuxuu hagaajin karaa heerkulka sare ee u adkaysiga u nuglaanta alaabteeda, adkaansho sare oo ah matolo dhalaalaya oo sarreeya iyo heerkulka heerkulka sarreeya ee heerkulka sarreeya, mashiinka gantaalaha loo isticmaalo sidii qalabka adag ee matoorrada 'Haaixin' faa'iidooyinka: isticmaalka habka dhalaalida biraha saafiga ah, nijaasta, waxyaabaha oksijiinta ku yar
Caanaha molecular Zrc
Xeerka CAS 12070-14-3
Sifooyinka budada madow ee cawlan
Barta dhalaalida 3540. C
Cufnaanta 6. 78g / cm3. -
Isticmaala loo adeegsaday diyaarinta waxqabadka sare ee tignoolajiyada sida carbide-ka sibidhka ah ee ashigh, aerospace, tamarta atomiga, textileelectronics, daahan, filim adag iyo otomaatiyada biraha. Qalabka cusub ee kaarboonomposite-ka ayaa hagaajin kara qallafsanaanta u adkeysiga alaabada ay soo saarto, adkeyn sarreysa oo ah matoolo dhalaalaya oo sarreeya iyo matoorrada heerkulka sarreeya ee heerkulka sarreeya, matoorka gantaalka loo isticmaalo sidii matenals adag oo proellantraw ah
Faa'iidooyinka Haixin isticmaalka habka dhalaalida biraha saafiga ah, wasakhda aan caadiga ahayn ee dib-u-warshadaynta, waxyaabaha oksijiinta ku yar
Magaca Ingiriisiga: Zirconium Carbide
CAS maya. : 12070-14-3
EINECS maya. : 235-125-1
Qaaciddada Molecular: ZrC
Miisaanka muruqyada: 103.2347
Dhirta dhoobada Zirconium. Qaaciddada kiimikada waa ZrC, cawl, wejiga udub dhexaad u ah shabag. Barta dhalaalaysa waa 3540 ℃, cufnaanta teori ahaaneed waa 6.66g / cm3, isugeynta balaarinta kuleylka waa 6.7 × 10-6C-1, microhardness waa 2600kg / mm2, adkeysiga waa 57 ~ 75 · cm, heerkulka oksidaha daran waa 1100 ~ 1400 ℃. Kalama milmi karo acid hydrochloric, laakiin ku milmi kara nitric acid. Budada guud ahaan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la yareeyo
ZrO2 oo leh kaarboon, ka dibna ka dib marka la isku qurxiyo, jilciya iyo dhoobada. Waxaa loo isticmaali karaa sida elektaroodiga, qalfoofka daciifka ah iyo sheyga qiiqa elektaroonigga ah ee cathode.
Muraayad madow oo buluug ah oo dhalaalaysa oo dhalaalaysa. Barta dhalaalida waa 3540 ℃. Qodobka karkaraya ee 5100 ℃. Cufnaanta muuqata waa 6.70g / cm3. Adkaanta Mohs 8 ~ 9. Laguma dhalaali karo biyo qabow iyo hydrochloric acid. Ku milma acid hydrofluoric ay ku jirto nitric acid ama hydrogen peroxide iyo sulfuric acid kulul oo xoog leh. Zirconium tetrachloride waxaa lagu sameeyaa falcelin leh gaaska koloriin heerkulka sare. 700 ℃, zirconia waxaa lagu sameeyaa gubashada hawada mana ku falceliso biyo.
Daahirsanaanta sare, size walxaha yar, qaybinta uniform, ballaaran oo dusha gaar ah, firfircoonaan dusha sare, cufnaanta hoose, iska caabin heerkulka sare, iska caabin qayilo, xoog sare, engegnaantiinna sare, conductivity kaamerada wanaagsan.
ISTICMAALKA ugu muhiimsan:
Zirconium carbide loo isticmaalo fiber: waxyaabaha kala duwan ee loo yaqaan 'zirconium carbide silicon carbide' ee budada ah iyo habka loogu daro waxyaabaha u dhow guryaha nuugista infrared ee fiilooyinka, marka maadada 'zirconium carbide' iyo silikoon carbide ay ka kooban tahay 4% (culeys), oo u dhow guryaha wax nuugaya ee infrared. ugu fiican, ku dar zirbionium carbide iyo silikoon carbide qolofta fiibarka u dhow saamaynta nuugista infrared ayaa ka sarreeya in lagu daro
saamaynta lakabka asaasiga ah;
2 zirconium carbide waxaa lagu dabaqayaa kuleylka kuleylka cusub iyo heerkulka habeynta dharka: zirconium carbide wuxuu leeyahay astaamaha nuugista wax ku oolka ah ee iftiinka muuqda, ka tarjumaya ray infrared, marka uu nuugo tamarta mowjadaha gaagaaban ee 2 m ka hooseeya 95% ee qorraxda, iyadoo loo marayo kuleylka beddelidda , Tamarta ayaa lagu keydin karaa maaddada, waxay sidoo kale leedahay astaamo milicsiga in ka badan 2 m dhererka dhererka infrared. Zirconium waxaa loo isticmaali karaa nooca cusub ee ilaalinta kuleylka iyo dhar-hagaajinta heerkulka.
Zirconium carbide waxaa loo isticmaalaa dawada adag, macdanta birta ah, la xoqin karaa, iwm. Zirconium carbide waa meel muhiim ah oo dhalaasho, xoog sare iyo u adkaysiga daxalka ee qaab dhismeedka heerkulka sare. Astaamaheeda wanaagsan waxay ka dhigeysaa inay leedahay meel codsi weyn oo carbide ka samaysan. Waxay hagaajin kartaa xoogga iyo iska caabinta daxalka ee daawaha adag.
4. Carbide Zirconium waxaa loo isticmaali karaa in lagu dahaadho sida heerkulka sare ee daahan u adkaysta si loo hagaajiyo sifooyinka dusha sare ee qalabka;
5. Zirconium carbide (ZRC) wax ka beddelka kaarboon-karbonka ee ka shaqeeya qalabka wax ku oolka ah: wax ka beddelka kaarboonka kaarboonku wuxuu si weyn u horumarin karaa xoogga kaarboonka. Hagaajinta caabbinta daalka kaarboon kaarboonka, kor u qaadista iska caabbinta iyo caabbinta heerkulka sare
Saamaynta wax ka beddelka aaladda hawada ee carbon carbon aerospace waa mid aad u muuqata.
Hore: Budada Tantalum Nitride, TaN
Xiga: Hafnium Carbide Powder, HfC
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan 'Zirconium carbide'
Warshad budada carbide Zirconium ah
Soo saaraha budada Zirconium carbide
Soosaarayaasha budada Zirconium carbide
Zirconium carbide budada Qiimaha
Xigashooyinka budada Zirconium carbide